Taa akara beta ihu ọha nke ngwaọrụ ọhụrụ maka ndị na-ere ahịa email na otu ndị okike, Emailium, nchekwa data nke imepe ahia email. Ngwa a dị n'ịntanetị na-edekọ ozi ịntanetị ọha na eze, ma na-ahazi ha site na rieslọ ọrụ, Companlọ ọrụ, ma ọ bụ mkpado akọwapụtara onye ọrụ.
Olee otú ọrụ a pụrụ isi baara gị uru? Ka anyị lelee ọnọdụ ole na ole:
Otu ndi okike - Mgbe a gbanwere ya maka ụzọ ọhụụ, ma ọ bụ ihe mgbagwoju anya na ngọngọ okike, ndị otu ihe nwere ike chọọ mmụọ nsọ na Emailium. Na-achọ imelite ezumike ezumike gị? Họchaa nchịkọta ahụ site na agba na akara ụbọchị iji hụ ihe ndị ọzọ na ụlọ ọrụ gị na-eme.
Ndị Na-enye Ọrụ Email (ESPs) - Ọchịchọ ịmata ihe ọzọ ESP na-eme vidiyo, mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ma ọ bụ nhazi email? Emailium nwere nchịkọta mkpado ọha na eze, nke na-enye ohere ịhazi site na isi ESP, yabụ ị nwere ike ịchọpụta.
marketers - gbalị ịchọta otú ị ga-esi tinye bọtịnụ Facebook "dị ka", ma ọ bụ olee usoro isiokwu nwere ike ịnweta nzaghachi ka mma? Dọọ nchịkọta site na ụlọ ọrụ ma ọ bụ usoro isiokwu ma chọpụta ozi ịntanetị ndị asọmpi.
Onye na-ere ahịa - Kedu ihe ndị asọmpi na-eme n'oge na-ebelata oge ezumike? 'Ve chọpụtala ya ugbu a - wepụta nchịkọta site na ụlọ ọrụ na ụbọchị ezumike.
Gị Emailium.com maka ozi ndị ọzọ, ma banye maka beta.
Jenụwarị 26, 2017 na 3:03 PM
Ndewo Bill, echere m na ọ ga-abụ ihe na-atọ ụtọ ịmara na Emailium bụzi ọrụ na-akwụghị ụgwọ a na-ere n'okpuru akara Email Creative Archive: https://www.freshaddress.com/eca/home.cfm